Takaro Ny Fizakàmanana Ao Amin’ny Tontolo Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2015 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, عربي, русский, 日本語, Français, Ελληνικά, English
“Pejy sy boky voafono matevina” avy amin'i Horia Varlan CC-BY 2.0
Ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Fizakàmanana Ara-tsaina, hetsika iray karakarain'ny Fikambanana Erantany ho an'ny Fizakàmana Ara-tSaina, dia isaky ny 26 Aprily no anaovana azy mba “hankalazàna ny fihavaozana sy ny fahaizana mamorona.” Ireo zo omen'ny lalàna momba ny fzakàmanana ara-tsaina, toy ny zon'ny mpanorona, dia natao hampifandanja ny zon'ireo mpamorona ho afaka mivelona avy amin'ny zavatra noforoniny, ary ny zon'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina mba ho afaka misitraka tsy misy fitongilànana an'ireny asa ara-kolontsaina ireny. Iray amin'ireo fomba nahatratrarana izay fifandanjàna izay ny fanaovana lalàna momba ny zon'ny mpamorona ho mandritry ny fotoana voafetra fa tsy ho mandrakizay.
Rehefa tapitra ny fotoana fiarovana iasan'ny teny hoe zon'ny mpamorona, dia miditra amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ilay asa. Azon'ny olona rehetra adika izay rehetra asa tafiditra amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, azo zaraina, ary adika malalaka sy tsy ilàna fangatahana alàlana aman'olona. Tena zava-dehibe ho antsika ny fahafahana miditra malalaka amin'ireo asa ao anatin'ny sehatra natao ho an'ny daholobe satria izy ireny no mandrafitra ireo antontan-javatra maro izay ampiasaintsika hamoronana asa ara-kolontsaina sy siantifika vaovao indray.
Mety ho sarotra ny hamantapantarana ny mety ho fomba fitsaharan'io teny io satria samihafa isaky ny firenena io ary miovaova miankna amin'ilay asa resahana. Ohatra, ny boky sy ireo asa soratra hafa dia voaaro any amin'ny tontolo Arabo, miainga eo amin'ny fotoana namoronana ilay asa ka mandra-pahafatin'ilay mpanoratra miampy 25, 50, na 70 taona taoriin'ny nodiany mandry.
Faharetan'ny fiarovana ny zon'ny mpamorona ho an'ny resaka boky
Vokatry ny fanarahan-dry zareo ny fepetra iraisampirenena TRIPS (Fifanarahana iraisampirenena momba ny endriky ny fizakàmanana ara-tsaina mifandray amin'ny resaka varotra), sy ny Fifanarahan'i Berne, ny ankamaroan'ireo firenena Arabo dia miaro ny boky mandritry ny fotoana ahaveloman'ny mpanoratra ary ampiana 50 taona aorian'ny fahafatesany. Bahrain, Maraoka, ary Oman dia samy manome fotoana lavabe ho an'ny resaka zon'ny mpamorona miohatra amin'ireo ambiny, noho ny sonia nataon'izy ireo hisian'ny fifanakalozana malalaka miaraka amin'i Etazonia, izay tsy dia hafa manao ahoana raha ampitahaina amin'ilay TPP (fifanarahana manerana an'i Pasifika) malaza ratsy ketrehana amin'izao fotoana izao.
Mety mbola ho sarotrarotra kokoa ilay fomba fiteny ho an'ireo karazana asa samihafa. Ohatra, na dia miaro ny saripika aza ny ankamaroan'ireo firenena Arabo, mitovy faharetana amin'ny an'ny boky, ny firenena sasany manome fepotoana fohy hiarovana ny saripika izay kajiana avy amin'ny fotoana nakàna na namoahana ilay saripika.
Faharetan'ny fiarovana ny zon'ny mpamorona ho an'ny resaka saripika
Ny tabilao eto ambony dia maneho fa sarotra ny fikajiana ny faharetan'ny zon'ny mpamorona. Ohatra, ny “Afghan Girl” nopihan'i Steve McCurry tamin'i 1984 sy navoakan'ny National Geographic tamin'ny 1985. Efa eny amin'ny sehatra ho an'ny daholobe ao Libia ilay saripika nanomboka ny 1991, ao Arabia Saodita nanomboka ny 2010, ao Yemen nanomboka ny 2011, ary mijanona mbola arovan'ny zon'ny mpamorona any amin'nireo firenene rehetra izay misy zon'ny mpamorona mifandray amin'ny fepotoana ahaveloman'ny tompony satria mbola velona i Steve McCurry.
Tokony hanamora ny fiainan'ny tsirairay ve ireo firenena izay manana fepotoana fohy ireo ka hanitatra ny fiarovany hifanaraka amin'ny an'ireo izay miaro ny zon'ny mpamorona mandritry ny fotoana lavabe? Ny tohankevitra matetika aroson'ireo izay manohana ny fiarovana mandritry ny fotoana elabe dia hoe nandany fotoana sy hery ny mpanoratra mba hahateraka ireny asany ireny ary noho izay dia mendrika ny ho arovana ny asany, mba hahazoany tombony mendrika azy, amin'izay fomba rehetra azo atao, izay tokony hitondra fandrisihana ho azy hamorona bebe kokoa.
Ny tohankevitra manohitra ny fanitàrana ny halavam-potoana hiarovana ny zon'ny mpamorona dia hoe tsy misy porofo hoe mety handrisika kokoa ireo mpanoratra mba hamorona asa vaovao raha toa ka omena fiarovana ny asany ry zareo mandritry ny 70 taona fa tsy 50 taona aorian'ny fahafatesany. Ny mifanohitra amin'izay, ireo mpampiasa any amin'ny firenena toa an'i Bahrain, Maraoka sy Oman dia mazava be fa tsy mahazo tombony amin'ilay fepotoana lavabe satria tsy maintsy miandry 20 taona fanampiny miohatra amin'ireo Arabo mpiray vodirindrina aminy alohan'ny fahafahana mandika sy mampiasa araka ny lalàna ho ataon'ireo anjerimanontolo, mpianatra ary mpampiasa hafa ireo asa vita tany aloha. Io elanelana 20 taona io dia manamora ny fahatongavan'ireo sehatra miankina amin'ny resaka zon'ny mpamorona, toy ny fanabeazana sy ny indostrian'ny fialamboly ho lafo ahodina mitaha amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy.
Io akory tsy hilazàna hoe tonga lafatra ny zavatra rehetra any amin'ireo firenena izay aharetan'ny fiarovana mandritry ny fotoana ahaveloman'ny mpanoratra, ampiana 50 taona, efa tena lavabe sahady io fiarovana io ary azo adika tsotra izao fa toa tsy ho hitantsika mandritry ny andro iainantsika hiditra eny amin'ny sehatra natao ho an'ny daholobe mihitsy, raha tsy hoe maty izy ireo, ny asa noforonin'ny hafa. Misy toejavatra maningana ihany anomezan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona any amin'ny tontolo Arabo alàlana ho an'ireo mpampiasa tsy hàka fahazoandàlana ary ho afaka handika na hampiasa ireo asa, saingy tsy misy firenena Arabo manome rirany ho an'ny “fampiasàna ara-drariny” izany, ary ireo zava-maningana dia voafetra sy tsy manome fahafahampo ny filàn'ireo mpampiasa asa misy famoronana ety anaty aterineto.
Tsy tokony hanitatra ny halavan'ny fepotoanan'ny zon'ny mpamorona ireo firenena Arabo nefa tsy handinika akory izay ho fiantraikany mety hisy amin'ny fahafahan'ny fiarahamonina miditra amin'ny fahalalàna sy ny kolontsaina. Ny fanamoim-piarovana tsy voatery hidika mihitsy hoe fandrisihana bebe kokoa ho an'ire mpanoratra mba hamoronany, ary azo antoka fa tsy hamorona rafitra tsara kokoa momba ny zon'ny mpamorona.
Lahatsoratra bniarahan'i Riyadh Al Balushi sy Sadeek Hasna nanoratra ity. Ny tabilao dia nalaina tao amin'ny Infographic on Copyright Term in the Arab World (torohay momba ny resaka zon'ny mpamorona any amin'ny tontolo Arabo).
Tiorkia 8 ora izay